မန်စီးတီးအသင်း ဘတ်စ်ကား လုံခြုံမှုအတွက် လီဗာပူးလ်မှာ တာဝန်ရှိဟု ဂွာဒီယိုလာ ပြော | Mizzima Myanmar News and Insight
မန်စီးတီးအသင်း ဘတ်စ်ကား လုံခြုံမှုအတွက် လီဗာပူးလ်မှာ တာဝန်ရှိဟု ဂွာဒီယိုလာ ပြော
မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလက လီဗာပူးလ်နဲ့ အဝေးကွင်းအဖြစ် သွားရောက်ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်နောက်ပိုင်း အန်ဖီးလ်ဆီ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပြန်လာချိန်မှာတော့ စီးတီး မန်နေဂျာ ပတ်ဂွာဒီယိုလာက ၎င်းတို့ ဘတ်စ်ကားကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ ရဲအဖွဲ့မလိုအပ်ပါဘူးလို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
မန်စီးတီးအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် ကွာတားဖိုင်နယ် ပထမအကျော့အဖြစ် ကစားဖို့ အန်ဖီးလ်ကွင်းဆီ ရောက်ရှိလာရာမှာ ၎င်းတို့ ဘတ်စ်ကားကို အရာဝတ္ထုများနဲ့ ပစ်ပေါက် တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းပွဲစဉ်တုန်းက စီးတီးအသင်းဟာ လီဗာပူးလ်ကို ၃-၀ ဂိုးပြတ်နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကစားမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ အရင်လိုမျိုး ပြန်ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိလားလို့ မေးမြန်းခဲ့ရာ ဂွာဒီယိုလာက “ဒါက လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် ကိစ္စတစ်ခုပါ။ ကျနော့်အတွက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘတ်စ်ကားကို ကာကွယ်ပေးဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက လီဗာပူးလ်ပရိသတ်တွေအတွက် ကွင်းထဲ ဝင်ရောက်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”လို့ ပြောပါတယ်။
သတင်းတွေ ဖော်ပြချက်အရ စီးတီးအသင်းဟာ လီဗာပူးလ်ပရိသတ်တွေဆီက ပြီးခဲ့တဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုး ထပ်မံဖြစ်ပွားမှုကနေ ရှောင်ကြဉ်ဖို့ အသင်းရဲ့ ဘတ်စ်ကားကို လျှို့ဝှက်ကင်မရာ ၁၅ လုံးနဲ့ တပ်ဆပ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
စီးတီးပရိသတ်တချို့ကလည်း ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုး ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေဖို့ ကစားကွင်း သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာ တန်းစီဖို့ မာဆေးဆိုက်ဆီ စောလျင်စွာ ရောက်လာရန် အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂွာဒီယိုလာကတော့ ဒါမျိုးလုပ်ဖို့ မလိုအပ်သင့်ဘူးလို့ အခိုင်အမာ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
“ဘာလို့ ကျနော်တို့ရဲ့ ပရိသတ်တွေက ကျနော်တို့ရဲ့ ဘတ်စ်ကားကို ကာကွယ်ပေးရမှာလဲ? ခင်ဗျားတို့ ကျနော့်ကို နောက်နေတာလား? ဘတ်စ်ကားကို ကာကွယ်ဖို့ ကျနော်တို့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ မလိုအပ်ပါဘူး။”လို့ သူက ပြောပါတယ်။
စီးတီးအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ လီဗာပူးလ်အသင်းကို ၂၅ မှတ်ဖြတ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်မှာတော့ နှစ်ကျော့ပေါင်း ၅-၁ ဂိုးနဲ့ လီဗာပူးလ်ကို အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။
မန်စီးတီး-ဘရိုက်တန်၊ ဝက်ဖို့ဒ်-ဝုလ်ဗ်တို့ တွေ့ဆုံတဲ့ အက်ဖ်အေဖလား...
ရှော်လ်ကေးနဲ့ပွဲကနေ သင်ခန်းစာမယူရင် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားအတွက် စိန်ခေ...
မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ၆-၀ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲအပေါ် ဂွာဒီယိုလိုနဲ့...